Garoowe: Ururka Kaalo Oo Daah Furay Mashruuc Horumarineed [Sawiro] • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Garoowe: Ururka Kaalo Oo Daah Furay Mashruuc Horumarineed [Sawiro]
Garoowe: Ururka Kaalo Oo Daah Furay Mashruuc Horumarineed [Sawiro]
Ururka maxalliga ah ee kaalo ayaa maanta Furay Mashruuc Cusub oo laga fulin doono afar degmo oo ka tirsan gobolka Nugaal, kasoo ay nasiib u yeelanayaan 4-tuulo oo hoos taga afartaas degmo.
Mashruucaan oo ah mashruuc horumarineed ayaa waxaa dhaqaalihiisa bixinaysa hay’ad Danish ah oo lagu magacaabo DPS, waxaana uu socan doonaa mudo sanad ah.
Gudoomiya Ururka Kaalo Maxmuud Shiikh Xaamud ayaa sheegay in mashruucani uu yahay mid horumarineed kaasoo lagu barayo maamuladda degmooyinkaa sida loo maamulo biyaha ,caafimaadka biyaha la xiriira iyo nadaafadda biyaha.
Maxmuud Shiikh Xaamud ayaa dhinaca kale sheegay in Mashruucaan laga fulin doono degmooyinka Buurtinle, Godob-Jiiran, Eyl iyo dagmada Garoowe, aydoo dagamo kastana laga qaban doono afar tuulo oo ka tirasan.
Munaasabadii mashruucan lagu daah furayey oo ay kasoo qayb galeen marti sharaf badan waxaa qaar kamid ah dadkii lagu casumey ay maamulka ururka Kaalo wax ka weydiiyeen qaabka uu mashruucaasi u fulayo iyadoo godoonka ururkaasi ay ka jawaabeen dhamaan su’aalihii la weydiiyey.
Mashruucan ayaa noqonaya kii ugu horeeyey ee noociisa ah ee laga fuliyo gobolka Nugaal waxaana si diiran usoo dhoweeyey in badan oo kamid ah qaybaha bulshada.